Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Duulimaadyada Flyr iyo Vueling oo ka imanaya Milan Bergamo hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Italy War Deg Deg Ah • News • Wararka Norway • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Milan Bergamo waxay ku dhawaaqday inay ku dartay laba la -hawlgalayaal diyaaradeed oo cusub Jiilaalka 21/22, taasoo xaqiijinaysa imaanshaha Flyr iyo Vueling bilaha soo socda.
Bilowga bisha Juun iyada oo la raacayo duulimaadyo gudaha ah, Flyrrrrrrrrrrrrrrrzzööööööö waxaa lagu daray Milan Bergamo oo ka mid ah marinnada caalamiga ah ee ugu horreeya.
Sii xoojinta isku xirnaanta Milan Bergamo, Isbaanishka LCC Vueling wuxuu bilaabi doonaa isku xirka Paris Orly laga bilaabo 2da Nofembar.
Flyr waxay bilaabi doontaa adeeg laba-toddobaadle ah saldhigeeda Oslo, Norway laga bilaabo Janaayo 5, 2022.
Isbuucaan Gegada diyaaradaha ee Milan Bergamo ayaa ku dhawaaqday inay ku biirisay laba la -hawlgalayaal diyaaradeed oo cusub oo ku soo biiri doona madaarka inta lagu jiro W21/22. Isagoo wadar ahaan gaarsiinaya shan markab oo lagu soo dhoweynayo wicitaanka duudduubka albaabka Lombardy ee sanadkan, gegida dayuuradaha ayaa xaqiijiyay imaanshaha Flyr iyo Vueling bilaha soo socda.
Bilowga bisha Juun iyada oo la raacayo duulimaadyo gudaha ah, Norwegian airline airline Duuliyaha ku daray Milan Bergamo ka mid ah kuwa ugu horreeya ee marinnada caalamiga ah. Furitaanka meel cusub oo loogu talogalay qabashada Lombardy, xamuulka qaaliga ah (LCC) wuxuu bilaabi doonaa adeeg laba-toddobaadle ah oo saldhigiisu yahay Oslo laga bilaabo 5-ta Janaayo 2022. Ku biiridda xiriirkii garoonka ee Sandefjord Torp, DuuliyahaXiriirinta tooska ah ee Oslo waxay la micno tahay in gegida dayuuradaha ee Talyaanigu ay Norway siin doonto wadar ahaan 756 kursi toddobaadkii xilliga jiilaalka.
Xoojin dheeraad ah Milan Bergamoisku xidhka, Isbaanish LCC Vueling waxay bilaabi doontaa isku xirka Paris Orly laga bilaabo 2 Noofembar. Bilowga hawlgal saddex-toddobaadle ah toddobaadkii, jadwalka cusub ee duulimaadka ee IAG Group airline oo ka socda caasimadda Faransiiska ayaa kor u qaadi doona shabakadda gegida dayuuradaha ee hore u lahayd Faransiiska. Siinta wadar ahaan 5,190 kursi toddobaadle ah waddanka Galbeedka Yurub, VuelingXiriirka Paris Orly wuxuu noqonayaa Bergamo meeshii toddobaad ee Faransiis ah, oo ku biirta Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, Tarbes-Lourdes iyo Toulouse.
Isaga oo ka faalloonaya duulimaadka cusub iyo ogeysiisyada halka loo socdo, Giacomo Cattaneo, Agaasimaha Duulista Ganacsiga, SACBO ayaa leh: “Had iyo jeer waa farxad weyn in aan soo dhoweyno lamaane cusub oo diyaaradeed, in aan ku dhawaaqo laba mar waa wax aad u wanaagsan, iyada oo labada shirkadoodba ay ku darayaan meelo soo jiidasho leh waddadayada shabakad iyo garashada kartida ka iman karta Milan Bergamo. Ku -darkayagii ugu dambeeyay waxaan ku faanayaa inaan xaqiijiyo inaan hadda haysanno 16 shirkadood oo u adeegaya 114 goobood 39 dal oo ka tirsan gobolka Lombardy taasoo ka tarjumaysa kalsoonida qof walba u qabo dib -u -kobcinta iyo ballaarinta gegida dayuuradaha. ”
Cattaneo wuxuu raaciyay: "Waxaan haynaa dhowr diyaaradood oo cusub oo nagu soo biiraya iyo Waddooyinka Adduunka ee Milan toddobaadkan, tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee shirkadaha kale ay yimaadaan oo nala hadli lahaayeen, inay qayb ka noqdaan fursadaha iyo mustaqbalka weyn ee Milan Bergamo."